Vaovao - Ahoana ny fanatsarana ny fahamarinan-toerana fisehoan'ny LED
Takiana ny tokony hitoeran'ny famatsiana herinaratra ary tokony ho tsara ny fiarovana ny tany. Tsy tokony hampiasaina amin'ny toe-javatra voajanahary ratsy, indrindra amin'ny toetr'andro mahery. Mba hisorohana ny olana mety hitranga dia afaka misafidy fiarovana tsy voaaro sy fiarovana mavitrika isika, andramo hitazona ireo zavatra mety hiteraka fahasimbana amin'ny efijery feno loko tsy ho eo amin'ny efijery, ary hamafana moramora ny efijery rehefa manadio, mba hampihenana ny mety hisian'ny fahasimbana. Vonoy aloha ny fampisehoana LED an'ny Maipu, ary vonoy ny solosaina.
Tazomy ny hamandoan'ny tontolo iainana izay ampiasain'ny efijery fampisehoana LED miloko feno, ary aza avela hiditra ao amin'ny efijery LED misy loko feno anao ny zavatra misy fangarony. Raha mandeha ny efijery lehibe fampiratiana feno loko misy hamandoana, ho simba sy ho simba ireo singa fampisehoana loko feno.
Raha misy rano ao amin'ny efijery noho ny antony maro samihafa dia miangavy ianao hamono avy hatrany ny herinaratra ary mifandraisa amin'ireo mpiasan'ny fikolokoloana mandra-pahamaina ny tontonana fampisehoana ao anatin'ny efijery.
Ampifamadiho ny filaharan'ny efijery LED:
A: Alefaso aloha ny solosaina fanaraha-maso mba hampandeha azy ara-dalàna, ary avy eo alefa ny efijery fampisehoana LED.
B: soso-kevitra fa ny fotoana fitsaharana amin'ny efijery LED dia tokony mihoatra ny adiny 2 isan'andro, ary ny efijery LED dia tokony ampiasaina farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro amin'ny vanim-potoana orana. Amin'ny ankapobeny, ny efijery dia tokony hohidiana farafahakeliny indray mandeha isam-bolana mandritra ny 2 ora mahery.
Aza milalao amin'ny fotsy rehetra, mena rehetra, maitso rehetra, manga sy sary mamirapiratra feno hafa mandritra ny fotoana maharitra, mba tsy hiteraka fihoaram-pefy tafahoatra, fanamafisana ny tsipika herinaratra, fahasimban'ny jiro LED ary hisy fiantraikany amin'ny androm-piainan'ny efijery fampisehoana.
Aza esorina na afangaro araka izay itiavany ny efijery! Ny efijery fampisehoana loko feno dia mifamatotra akaiky amin'ireo mpampiasa anay, noho izany ilaina ny manao asa tsara amin'ny fanadiovana sy fikojakojana.
Ny fahalalàna ny tontolo ivelany dia lava, rivotra, masoandro, vovoka sns dia mora maloto. Aorian'ny vanim-potoana iray dia tsy maintsy misy vovoka eo amin'ny efijery, izay mila diovina ara-potoana mba hisorohana ny vovoka tsy ho fonosina mandritra ny fotoana maharitra, misy fiatraikany amin'ny vokan'ny fijerena.
Ny habaky ny efijery lehibe misy ny LED dia azo esorina amin'ny alikaola, na diovina amin'ny borosy na fanadiovan-drivotra, fa tsy amin'ny lamba lena.
Ny efijery lehibe an'ny efijery fampisehoana LED dia tokony hozahana matetika raha hahomby raha mandeha ara-dalàna izy na simba ny faritra. Raha tsy mandeha izy dia tokony hosoloina ara-potoana. Raha simba ny faritra dia tokony hamboarina na soloina ara-potoana.
Fotoana fandefasana: Mar-31-2021